Indlela Yokusondela KuThixo | Sondela
Ngaba uziva usondele kuThixo? Kwabaninzi, oko kubonakala kuyinto engenakwenzeka. Bambi banoloyiko lokuba ukude kuthi; abanye bavakalelwa kukuba abakufanelekelanga ukusondela kuye. Noko ke, ngothando iBhayibhile isibongoza isithi: “Sondelani kuThixo, naye uya kusondela kuni.” (Yakobi 4:8) Ude abaqinisekise abanquli bakhe, esithi: “Mna, Yehova Thixo wakho, ndibamba isandla sakho sasekunene, ndithi kuwe, ‘Musa ukoyika. Mna ngokwam ndiza kukunceda.’”—Isaya 41:13.
Sinokulufikelela njani ulwalamano olusondele ngolo hlobo noThixo? Ukuze naluphi na ulwalamano luqine, kufuneka umazi umntu lowo, uziqonde yaye uzixabise iimpawu abalasele kuzo. Ngoko iimpawu zikaThixo nendlela enza ngayo izinto, njengoko zichaziwe eBhayibhileni, zizinto ekubalulekileyo ukuba sifunde ngazo. Ukuhlolisisa indlela uYehova alubonakalisa ngayo ngalunye lweempawu zakhe, ukubona indlela uYesu Kristu azibonakalisa ngokugqibelele ngayo, nokuqonda indlela thina esinokuzihlakulela ngayo, kuya kusenza sisondele ngakumbi kuThixo. Siza kubona ukuba uYehova unguMongami wendalo ofanelekileyo nogqibeleleyo. Ngaphezu koko, uluhlobo loBawo sonke esimfunayo. Unamandla, usesikweni, unobulumko nothando, yaye akaze abalahle abantwana bakhe abathembekileyo.
Ngamana le ncwadi ingakunceda usondele ngakumbi kuYehova uThixo, uze wakhe naye ulwalamano olungasayi kuze luqhawuke ukuze uphile uze umdumise ngonaphakade.